In ka badan 31 Kun oo Arday oo maanta u fariisanaysa qaadista Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare | Radio Banadir
Home Dhacdooyinka In ka badan 31 Kun oo Arday oo maanta u fariisanaysa qaadista...
In ka badan 31 Kun oo Arday oo maanta u fariisanaysa qaadista Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare
Isniin, 27 May 2019 (RBB News) – In ka badan 31 kun oo Arday ayaa maanta u fariisinaya Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare ee dowladda ay qaadeyso,kadib markii uu horay u fashilmay imtixaankii 11kii Bishaan ay qaadeysay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Baraha Bulshada ayaa xalay lagu arkaayay warqado kala duwan oo lagu sheegay inay yihiin Imtixaanka maanta ardayda u fariisanayaan, balse arrintaasi waxaa beeniyay masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada Somaliya.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Somaliya Maxamuud Cabdulaahi Jaabiri ayaa sheegay in si wayn loo adkeeyay nidaamka qaadista Imtixaanka islamarkaana maanta si wanaagsan uu ku bilaabanayo imtixaanka.
“Waxyaabaha baraha Bulshada lagu faafiyay ee la leeyahay waa Imtixaankii waa been abuur waa Imtixaan hore aniga ayaa Koontaroolay, marka dadka beenta faafinaya oo isku dayaya qal qal gelinta Imtixaanka waan uga digeynaa.” Ayuu yiri Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Somaliya.
Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare ee dalka oo sanadkaan Wasaaradda waxbarashada Somaliya ku fashilantay, ayaa ugu dambeyn la filayaa in maanta si hagaagsan uu ku bilowdo.
Previous articleEU Election 2019: Results in maps and charts
Next articleDhageyso:- Jubbaland oo beenisay War kasoo baxay xildhibaan c/rashiid maxamed xidig